Marcus Rashford ayaa saadaaliyay xiddigga
Weeraryahanka Manchester United Marcus Rashford ayaa saadaaliyay in la badali doono da ’yarka Shola Shoretire dhamaadka kulankii shalay ay 3-1 kaga badiyeen Newcastle United.
Pep Guardiola waxay ahayd in shaqada laga eryo
Kala saraynta Horyaalka Kabaha Dahabka
Shola Shoretire ayaa soo gashay daqiiqadii 89aad kulankeedii ugu horeeyay ee waayeelka ah.
17 jirkaan oo qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay kooxda Manchester United bilihii ugu dambeeyay ayaa waxaa u dallacsiiyay Ole Gunnar Solskjær kooxda koowaad, isagoo raacay wadadii Marcus Rashford, kaasoo dalacsiiyay Louis van Gaal mudadii yareyd ee uu xilka hayey. . oo ka socda Red Devils.
Rashford ayaa u sheegay TV-ga Manchester United ee MUTV Shola Shoretire: “Xitaa wuu igayaryahay aniga (markii loo dallacsiiyay kooxda koowaad). Waa waqtigii ugu sarreeyay. Maaddaama aan nahay ciyaartoygii ugu da’da yaraa ee kulankiisii ​​ugu horreeyay safto, waxaan rajeyneynaa inaan isku mid kugu aragno jidka (sidii markii Rashford u soo baxay).
Shola Shoretire wuxuu leeyahay karti badan, inta badan wuu nala tababaraa, wuu nala ciyaaraa wuxuuna dareemayaa raaxo wuxuuna ku muujin karaa tayadiisa garoonka dhexdiisa. ”
Marcus Rashford ayaa sidoo kale amaanay Manchester United oo dhiig cusub ku soo kordhisay dhalinyarada wuxuuna yiri: “Kuliyada, marwalba waxay xoojiyaan ciyaartoyda kooxda koowaad. Had iyo jeer waxay umuuqataa mid wanaagsan, maxaa yeelay waan ogahay markii aan yaraa inaan doonayay inaan ku biiro kooxda koowaad. Waa wareeg waxaan rajeynayaa in dhalinyarada ay arki doonaan isagoo ciyaaraya oo ay bilaabi doonaan. “
axadle 8508 posts
Kenya oo xal u raadineysa Korontada dileysa Duur-joogta! –
In the scoop: Hirak, two years later …